'कानपुरको मसानघाटमा एकिदिन ४ सय ७६ ओटा चिता,सरकारी आँकडाअनुसार ६ को मृत्युु' - firewordsdaily
TRENDING #त्रिवि #निषेधाज्ञा #कथा #कविता #विनोद चौधरी
'कानपुरको मसानघाटमा एकिदिन ४ सय ७६ ओटा चिता,सरकारी आँकडाअनुसार ६ को मृत्युु'
एजेन्सी । पछाडि निलो आकाश र तल जलिरहेको चिताबाट उडेको धुवाँ आकाशमा फैलदैं थियो । बिहीबार कानपूरको भैरवघाटस्थित स्मशानबाट खिचिएको यो तस्विर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ र यसैलाई देखेर मानिसहरुले मानवीय त्रासदीको अन्दाज लगाइरहेका छन् ।
यो तस्विर पिटिआईका फोटोग्राफर अरुण शर्माले खिचेका हुन् । शर्माले यही समय एक भिडियो पनि शेयर गरेका छन्, जो ट्वीटर र इन्स्टाग्राममा भाइरल बनेको छ । अरुण शर्मा भन्छन्, ‘जब यो तस्विर मैले खिचें । तब घाटमा ३८ वटा चिता जलिरहेका थिए । केही चितालाई पानी हालेर ठन्डा गरिदैं थियो ।’
यो घाटमा केवल कोरोनाका बिरामीको लाशमात्रै जलाइदैं थियो । यहाँ लगातार जलिरहेका चिताको गर्मीका कारण नजिकै रहेका रुखहरू पनि जलेका थिए ।’ १५ वर्षदेखि फोटो पत्रकारिता गरिरहेका अरुण शर्मा भन्छन्, ‘मैले ठूलाभन्दा ठूला त्रासदीको रिपोर्टिङ गरेको छु । तर यस्तो महसूस कहिल्यैं गरिन । यो दृश्य मन–मस्तिस्कमा बस्नेखाले थियो ।’
१६ अप्रिलमा दिल्लीदेखि कानपुरसम्म पुगेर अरुणले अस्पतालहरुमा, मसानघाटहरुमा फोटो खिचिरहेका थिए । उनी शहरका अलग–अलग स्थानमा गएर कोरोना महामारीको व्यापकताको अन्दाज लगाउने कोसिस गरिरहेका थिए ।
अरुण भन्छन्, ‘म दिनको समय पनि मसानघाट गएको थिएँ । मलाई लागेको थियो कि स्थिति ठिक छैन । त्यतिबेला लाशहरु दिउँसोको समयमात्रै जलाईदै थियो, तर फेरि प्रशासनले रातको समय पनि लाश जलाउने निर्णय लियो । एक स्थानीय पत्रकारले मलाई राती लाश जलाइएको भिडियो पठाएका थिए ।’
उनी थप्छन्, ‘त्यस दिन मैले रातको समय मसानघाट पुग्ने फैसला लिएँ । त्यहाँ १०–१२ लाश बाहिर थियो र ३८ चिताहरू जल्दै थिए । चिताहरूबाट उठेको धुवाँ पछाडिको निलो आकाशमा गइरहेको थियो । यो त्रास सिर्जना गर्ने दृश्य थियो ।’
अरुण भन्छन्, ‘त्यहाँ यति गर्मी थियो कि उभिएर बस्न असम्भव थियो । चिताहरूको गर्मीले शरीरलाई तातो बनाइरहेको थियो, मलाई लागिरहेको थियो कि हामीभित्र पनि केही जलिरहेको छ । शरीरमा क्याल्सियम हुन्छ र क्याल्सियम जल्दा निकै दुर्गन्ध आउँछ अनि सेतो धुवाँ निस्कन्छ ।’
अरुणका अनुसार त्यस समय मसान घाटमा ती व्यक्तिमात्रै थिए, जो शव बोकेर आएका थिए । उनीहरुबाहेक अरु कोही थिएन । यस मसान घाटमा १२ मानिस काम गर्छन्, त्यसमध्ये चार व्यक्ति उक्त समय चितामा जल्दै थिए ।
अरुण शर्मा र अन्य धेरै पत्रकार तमाम खतराका बाबजुद बाहिर निस्किएर घटनास्थलका तस्विर मानिसहरुसामु पुर्‍याइरहेका छन् । के उनीहरुलाई कोभिडका दौरान पत्रकारिता गर्दा डर लागिरहेको छैन ?
यसबारे उनी भन्छन्, ‘म सामु दुुईमात्रै विकल्प छ , या त भाग लिने या यहाँबाट भाग्ने, भाग्नुको साटो भाग लिइरहेको छु । लाशहरुको तस्विर लिनु एक अलग अनुभव थियो । आमरुपमा यस्तो हुँदैन । यति धेरै मानिसहरुको मृत्यु एकैपटक हुँदैन । तस्विर खिच्दाको समय मनमा जे चलिरहेको थियो, त्यसलाई बताउनु सहज छैन ।’
अरुण भन्छन्, ‘आम रुपमा हामी प्रदर्शन र प्रेस कन्फ्रेन्स कभर गर्छौं, यति धेरै लाश एकैपटक देखिदैंन । स्वभाविक रुपमा मन–मस्तिस्कमा यो सबैको असर परिरहेको छ । एकै दिन जब दुई सय ५० मानिसको लाश देखिन्छ, तब त्यसको असर दिमागमा परी नै हाल्छ ।’
कानपुरका यी तस्विरहरू भाइरल भएपछि सरकारी आँकडाबारे पनि प्रश्न उठिरहेको छ । स्थानीय पत्रपत्रिकाका अनुसार जुन दिन कानपुरको मसान घाटमा ४ सय ७६ वटा चिता जलेका थिए, त्यस दिन प्रशासनको आधिकारिक आँकडाअनुसार केवल ६ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
के वास्तविक आँकडालाई जनताबाट लुकाइदैंछ ? एक वरिष्ठ अधिकारीले आफ्नो नाम नछाप्ने शर्तमा बीबीसीसँग भनेका छन्, ‘वास्तविक तस्विर यति भयावह छ कि मानिसहरु तर्सनेछन् ।’ अरुण शर्मा भन्छन्, ‘वास्तविकता चाहे जति नै विभत्स किन नहोस्, हाम्रो काम त्यसलाई देखाउनु हो । हामीले आफ्ना तस्विरमार्फत यो अवस्थालाई इतिहासमा दर्ज गरिरहेका छौं । यी तस्विरहरूलाई आँकडासँगै राखेर हेर्न सकिन्छ र मानिसहरुले वास्तविकता जान्न पाउनेछन् ।’
उनले भने,‘जबसम्म हामीले परिस्थितिको गम्भिरता र भयावहतालाई स्वीकार गर्दैनौं । तबसम्म यसको सामना गर्न सक्दैनौं । मलाई लाग्छ कि हाम्रा तस्विरहरूले वास्तविकतालाई मानिसहरु सामुन्ने राखेका छन् ।’
यस महामारीमा मानिसहरुले आफ्ना मानिसलाई गुमाइरहेका मात्रै छैनन्, बरु उनीहरुलाई मानवताबाट भरोसा उठिरहेको अनुभव पनि भइरहेको छ ।
अरुण भन्छन्, ‘अस्पतालहरू बाहिर हामीले धेरै त्यस्ता मानिस भेटिरहेका छौं । जसको गुनासो परिवारजनको लाश मात्रै पाइयो, उनीहरुको सामान पाइएन भन्नेछ । केहीका अनुसार नेक्लेस, औँठीलगायत बिरामीले लगाएका गहनाहरू शवमा भेटिएका छैनन् ।’
अरुणले पछिल्लो एक सातादेखि कानपुरमा अस्पतालहरू, ग्यास स्टेशन र अन्त्येष्टी स्थलहरूको चक्कर काटिरहेका छन् । उनी भन्छन्,‘मलाई लाग्छ कि यस महामारीको वास्तविकता अझै पनि बाहिर आइरहेको छैन । अस्पतालबाट मानिसहरु मरिरहेका छन् । उनीहरुलाई अक्सिजन मिलेको छैन ।’
म्यानमारका ३ हजार नागरिक भागेर थाइल्याण्ड पुगे
म्यानमारमा अन्तिम संस्कार गरिरहेकाहरूमाथि पनि सेनाले चलायो गोली
फाइजरको ५० करोड डोज खोप अगस्टदेखि वितरण गर्ने: अमेरिका
firewords daily, ७ दिन पहिले
आङ सान सुकि विरुद्ध भ्रष्टाचारको थप मुद्दा
खतरनाक गतिविधि गरे जवाफ फर्काउन, पुटिनलाई बाईनले दिए चेतावनी
दीपक मनाङेले मुख्यमन्त्री गुरुङको साथ छाडे
निषेधाज्ञाको समयमा लैङ्गिक हिंसा बढ्यो,२०० भन्दा बढी घटना
टोखा नगरपालिका प्रमुख द्वारा मेयर उज्यालो कार्यक्रमको सुरुवात
फायरवोर्ड्स डेली २ महिना पहिले
सात वटै प्रदेशमा विधुतिय सवारी चार्जिङ स्टेशन बन्ने, चिनियाँ कम्पनीसँग...
कोरोना संक्रमण बाट एकै दिन ३५ को मृत्यु, झन्डै ५...